PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Uhambe phambili ngemisebenzi owamahhotela
Uhambe phambili ngemisebenzi owamahhotela
Isolezwe - 2017-09-14 - EZOMNOTHO - NONTUTHUKO NGUBANE
UCHONYWE uphaphe lwegwalagwala umnikazi wamahhotela iLawu, uMnuz Simphiwe Ngcobo, waseMgungundlovu, ngokwakha amathuba omsebenzi.
UNgcobo (37) oqashe abantu abangaphezu kuka-100 ngokugcwele uhlomule nge- 2017 Job Creator of the Year, kuma- Entrepreneurs of The Year South Africa (EOY) ahlelwe ngokubambisana nenkampani yakwaSanlam.
UNgcobo uthole lo mklomelo ngesonto eledlule eGoli. Ubeqhudelana namabhizinisi amaningi amakhulu ahlukene akuleli.
“Namanje ngisamangele futhi besingalindele ukuthi singahlomula ngale ndlela kwazise besiqhudelana namabhizinisi amaningi, aseneminyaka esebenza. Thina siqale ngo-2009 kodwa sesihamba phambili. Okujabulisayo wukuthi siklonyeliswe ngento esihlezi siyibeka phambili kuleli bhizinisi yokukhiqiza amathuba emisebenzi ukuze abantu bezokondla imindeni yabo,” kusho uNgcobo.
UNgcobo uqale ibhizinisi lakhe lamahhotela ngo-2009, kusukela ngaleso sikhathi usenamahhotela amathathu eMgungundlovu, amabili eNewcastle nelinye elisha e-Vryheid.
“Ngiqale ukuba usomabhizinisi ngisafunda, ngangidayisa oswidi. Ngangine-tuckshop sengisebenza. Ngafundela ukuba unjiniyela ngaze ngaqashwa ngasebenza kodwa ngagcina ngixoshwa ngenxa yakho ukuthi ngangihlezi nginamabhizinisi eceleni. Ngaqala kancane ngithenga izakhiwo nezindawo zokwakhwa njengoba izakhiwo esinazo zamahhotela singaziqashile kodwa ngezethu,” kusho uNgcobo.
Uthando lwamahhotela uthe waqala ukuba nalo ngesikhathi efundela umsebenzi wokuba unjiniyela e-Italy ngo-2001.
“Yize ngangihambe ukuyofunda omunye umsebenzi, ngahlabeka umxhwele ngendlela amahhotela ayesebenza ngayo. Ngaqala ukuzibuza imibuzo eminingi ngaleli bhizinisi. Ngabuyela e-KZN ngaqala ngabuka izinhlobo ezehlukene zamahhotela. Ngagcina ngisungule elami ngoba ngifuna abantu babe nendawo ekahle yokuhlala futhi ngakhe amathuba emisebenzi,” kusho uNgcobo.
Uthe okwenza amahhotela akhe aphumelele, ukusebenza kanzima kwabo bonke abasebenzi abaqashile.
Uthe babambisene kahle kakhulu, bahlose ukuba bavule amanye emadolobheni athathwa njengamancane eKZN.
“Ukuwina lo mklomelo kungukuqala kwezinto ezinkulu esisahlose ukuzenza. Sifuna ukukhula size sibe khona yonke indawo e-KZN. Sifuna nokusungula amanye amathuba emisebenzi,” kusho uNgcobo.
UNgcobo uyale abanye osomabhizinisi abasebancane ngokuthi kumele bawuthande umsebenzi wabo futhi bazinikeze ithuba lokufunda ngaso sonke isikhathi.
UNgcobo uthe imfundo ibalulekile kakhulu kodwa kumele abafundela iziqu bacabange ukuthi bangazenzela kanjani amathuba emisebenzi, bangabheki ukuqashwa kuphela.
UMSUNGULI wamahhotela, iLawu, uMnuz Siphiwe Ngcobo (37) nomklomelo wokuba usomabhizinisi ohamba phambili ekwakheni amathuba emisebenzi